कत्तिको तर्साउँछ ऋचा शर्माको ‘सुनकेशरी’ ट्रेलरले ? « Ramailo छ
कत्तिको तर्साउँछ ऋचा शर्माको ‘सुनकेशरी’ ट्रेलरले ?
नायिका ऋचा शर्माले निर्माण गरेको हरर जनराको फिल्म ‘सुनकेशरी’को ट्रेलर रिलिज गरिएको छ । अर्पण थापा निर्देशित फिल्मको प्रोमोले तर्साउँछ । जेठ ११ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्मको बिहिबार प्रेसमिट गर्दै प्रोमो सार्वजनिक गरिएको हो । प्रोमो हेर्नुस् :
प्रेसमिटमा नायिका तथा निर्मात्री शर्माले हरर मन पराउने दर्शकका लागि सुनकेशरी राम्रो हुने बताइन् । उनले फिल्मको लगानी दुई करोड लगानी दाबी गरेकी छन् । ‘सार्वजनिक प्रदर्शनबाट लगानी उठ्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं’, ऋचाले भनिन् । यता निर्देशक थापाले सुनकेशरी हेरेर दर्शक तर्सिनेमा ढुक्क रहे ।
मनोज अधिकारी कार्यकारी निर्माता रहेको सुनकेशरी मा ऋचासँगै सनी ढकाल, लोरेन लोफवर्ग, रविन्द्र झा, सुनिल पराजुली, कृष्ण तिवारी लगायत कलाकारहरुको अभिनय छ । राम शर्माको छायाँकन रहेको सुनकेशरीमा कालिप्रसाद बाँस्कोटा र विजय अधिकारीले संगीत दिएका छन् ।